DAAWO: Qaraxii Xooganaa ee Galabta ka Dhacay Magaalada Muqdisho - Hablaha Media Network
DAAWO: Qaraxii Xooganaa ee Galabta ka Dhacay Magaalada Muqdisho
HMN:- Faahfaahino dheeraad ah ayaa waxa ay ka soo baxayaan qarax xoogan oo galabta ka dhacay maqaayad ku taalla wadada Maka Al-Mukarama gaar ahaan ka soo horjeedka Ex-Shineemo Soomaali.
Weerarkan ayaa dad goob joogayaal ah waxay sheegeen in loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey oo la dhigay afaafka hore ee Maqaayadan oo magaceeda la yiraahdo Italian Coffee.
Qaraxan ayaa ahaa mid xooggan oo si weyn looga maqlay inta badan magaalada Muqdisho, waxaana xiliga qaraxu dhacayey maqaayada ku sugnaa dad fara badan oo halkaas xiliyada galabtii u soo doontay Shaah iyo caffe.
Ugu yaraan 6 qof ayaa la xaqiijiyey inuu ku geeriyootay qaraxan, halka toban kale ay ku dhaawacmeen kuwaasoo ka mid ahaa dadkii ku sugnaa maqaayada gudaheeda iyo agagaarkeeda.
Wararka qaar ayaa sheegaya in maqaayadan ay iman jireen dad fara badan oo ay ka mid yihiin shaqaale, saraakiil iyo agaasimayaal ka tirsan heyadaha xukuumada Soomaaliya.
Ciidamada amaanka ayaa xiray goobta qaraxani uu ka dhacay, iyagoo rasaas goos goos ah hawada u ridayay si ay ugu kala ceyriyaan dadweyne badan oo halkaas ku yaacay si ay indhahooda ugu soo arkaan khasaaraha goobta ka dhacay.
Gaadiidka dab demiska oo goobta gaaray ayaa demiyey gaadiid badan oo goobta qaraxu ka dhacay ku gubanayey, sidoo kale gaadiidka gurmadka deg deg ah ee ambalaasta ayaa iyana ku howlanaa sidii ay isbitaalada u gaarsiin lahaayeen dadka ku dhaawacmay qaraxan.